ATV Source – Press Releases – Nac's/Cannondale Post Strong Mid-Term Grades | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (34165)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (10802)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9821)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9358)
ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ relay ကိုအမျိုးအစားများအပေါ်မှတ်စုများ (သတိပေးခြင်း: မှိုင်းခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့စရာ ... (8934)
VP ပြိုင်ပွဲလောင်စာနောက်ဆုံးရသတင်းများ: VP UNLEADE မိတ်ဆက် ... (8529)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (7828)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7047)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (6926)
Yamaha ထုတ်လုပ်မှု Tesseract ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်? RideA ... (6467)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6105)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5547)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5413)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5193)
နေအိမ် → စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော → ATV Source - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale Post ကိုခိုင်ခံ့အလယ်အလတ် Term အတန်း
ATV ရင်းမြစ် – သတင်းထုတ်ပြန်ချက် – Nac’s/Cannondale Post Strong Mid-Term Grades
26 မတ်လ 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် ATV ရင်းမြစ် – သတင်းထုတ်ပြန်ချက် – Nac’s/Cannondale Post Strong Mid-Term Grades
Throughout the season the team has shown repeatedly that their Cannondale Moto 440s and Blaze 440s are every bit as competitive as the $30,000 custom-built race ATVs found on the GNC and GNCC circuits. Already this year, Nac’s/Cannondale racers have had the occasion to beat every brand, အောင်, ပုံစံ, and configuration of race quad and have finished ahead of many of the best riders in the country, including five of the top-ten GNC Pro’s and four of the top-ten GNCC Pro riders.
Nac’s/Cannondale’s only disappointment was the loss of the team’s pro GNC rider, Ben Jackson, for three months to an off-season injury. Jackson recently returned to racing, သို့သော်, and although not yet 100% recovered or thoroughly familiar with his new Moto 440, he placedastrong 7th in the Pro class at the London, Kentucky GNC race.
အတူတူ, both teammates also competed in the four-stroke Pro Am class and have combined 22 top-ten finishes in 24 motos, including five wins and nine podium appearances.
Combining both the GNC and GNCC totals, Team Nac’s/Cannondale has 30 top-ten finishes in 46 လူမျိုး, with 13 podium appearances and five wins.
Riding ATVs 13 နှစ်ပေါင်း – Racing ATVs 11 နှစ်ပေါင်း, nine asaPro
Riding ATVs 16 နှစ်ပေါင်း – Racing ATVs two years
Raced Go-Karts nationally for 11 နှစ်ပေါင်း
Riding ATVs 18 နှစ်ပေါင်း; racing ATVs 10 နှစ်ပေါင်း
20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ပွိုငျဘမော်တော်ဆိုင်ကယ်
20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Blata mini ကို Moto
20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 1939 အိန္ဒိယ Scout ပြိုင်ကားသမား – ဂန္ထဝင်အမေရိကန်မော်တော်ဆိုင်ကယ် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂန္တဝင်
20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Jaguar ကိုကား
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 1939 AJS 500 V4 ပြိုင်ကားသမား – ဂန္ထဝင်ဗြိတိန်မော်တော်ဆိုင်ကယ် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂန္တဝင်
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် သုညမော်တော်ဆိုင်ကယ်အားလုံး-နယူးကမ်းလှမ်း 2010 အောက်မှာ $ 7500 ဘို့သုည DS နှင့်သုည S က…
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Harley Davidson အမဲဆီဎဓာတ်ဆီ
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Brammo Enertia လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ် - Best Buy မှာ?
KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို Ducati 60 Ducati Diavel ဆူဇူကီး Colleda CO Aprilia Mana 850 ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Bajaj Discover Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဆူဇူကီး AN 650 သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Moto Guzzi 1000 Daytona Injection စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Brammo Enertia တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype စမတ် eScooter ဟွန်ဒါ DN-01 Ducati Desmosedici GP11 ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic